Umaki: Xero | Martech Zone
I-Syncari: Hlanganisa futhi uphathe imininingwane esebenza ngokunqamula, Yenza ngokuzenzakalela ukuhamba komsebenzi uphinde usabalalise imininingwane ethembekile yonke indawo.
ULwesine, May 13, 2021 ULwesine, May 13, 2021 Douglas Karr
Izinkampani ziminza kudatha eqoqeka ku-CRM yazo, ezenzekelayo zokumaketha, i-ERP, neminye imithombo yedatha yamafu. Lapho amaqembu asebenzayo abalulekile engavumelani ngokuthi iyiphi idatha emele iqiniso, ukusebenza kuyanqindeka futhi izinhloso zemali engenayo kunzima ukufinyelelwa. ISyncari ifuna ukwenza impilo ibe lula kubantu abasebenza kuma-ops wokumaketha, ama-ops wokuthengisa, kanye nama-ops wemali ahlala elwa nedatha yokuthola indlela yokufeza izinhloso zawo. I-Syncari ithatha okusha
I-Chartio: Ukuhlola Idatha Okusekelwe Emafini, Amashadi Nama-Dashboard Asebenzisana
NgeSonto, uDisemba 3, i-2017 NgeSonto, uDisemba 3, i-2017 Douglas Karr
Ambalwa amadeshibhodi wedeshibhodi anekhono lokuxhuma cishe kuyo yonke into, kepha uChartio wenza umsebenzi omuhle ngesixhumi esibonakalayo somsebenzisi okulula ukungena kuso. Amabhizinisi angaxhuma, ahlole, aguqule, futhi abone ngeso lengqondo kusuka kunoma yimuphi umthombo wedatha. Njengoba kunemithombo eminingi yedatha ehlukene nemikhankaso yokukhangisa, kunzima kubakhangisi ukuthola ukubuka okugcwele ku-lifecycle yekhasimende, ukunikezwa kanye nomthelela wayo wonkana emalini engenayo. Chartio Ngokuxhuma kubo bonke
Khulisa: Yakha Ideshibhodi Yokukhangisa Nge-Intanethi Ekugcineni
NgoLwesihlanu, Novemba 27, 2015 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
Singabalandeli abakhulu bezinkomba zokusebenza ezibukwayo. Njengamanje, sisebenzisa imibiko yezinyanga zonke kumakhasimende ethu futhi, ngaphakathi ehhovisi lethu, sinesikrini esikhulu esibonisa ideshibhodi yesikhathi sangempela yazo zonke izinkomba zomsebenzi wokukhangisa we-inthanethi wamakhasimende ethu. Kube ithuluzi elihle - njalo lisazisa ukuthi yimaphi amaklayenti athola imiphumela ephezulu nokuthi imaphi anethuba lokwenza ngcono. Ngenkathi njengamanje sisebenzisa iGeckoboard, kunemikhawulo embalwa esiyikho
Mailigen: I-imeyili Ehlanganisiwe, i-SMS, kanye Nokumakethwa Komphakathi
ULwesihlanu, July 18, 2014 NgoMsombuluko, Januwari 16, 2017 Douglas Karr
Kuhle ukubona izwe lokuthumela imiyalezo lijwayela izindlela ezinhlobonhlobo abathengisi okufanele bazisebenzise nsuku zonke. Okusebenziseka kakhulu kulezi zingxenyekazi zokumaketha ezihlanganisiwe yikhono lokukhulumisana, ukukala nokuqopha indlela yokuziphatha kwabaholi bakho bokukhangisa namakhasimende. Martech Zone Abafundi bangathola ama-45% OFF ukubhaliswa kwenyanga engu-6 kohlelo lwababhalisile bakaMailigen abangama-2500-5000 besebenzisa isixhumanisi sethu sokusebenzisana esifakwe kulokhu okuthunyelwe! UMailigen unikeza ukumaketha nge-imeyili, okubangelwe ukumaketha kwe-imeyili, ukuthumela imiyalezo